Golaha wasiirada oo kulan aan caadi ahayn ku yeeshay magaalada Muqdisho (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Golaha wasiirada oo kulan aan caadi ahayn ku yeeshay magaalada Muqdisho (SAWIRO)
Golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan aan caadi ahayn ku yeeshay magaalada Muqdisho, kaas oo ay kaga doodayeen miisaaniyadda 2017 iyo ansixinta xisaab-xirkii miisaaniyaddii 2016-ka.
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte oo kulankaas shir-guddoominayay ayaa waxaa warbixin looga dhageystay wasiirka maaliyadda oo sheegay in guddoonka baarlamaanku ka codsadeen inay soo diyaariyaan miisaaniyadda dowladda ee sanadkaan, si looga feejignaado in howlaha dowladda ay istaageen maadaama miisaaniyada hadda jirtaa ay ku egtahay bisha March ee sanadkaan.
Waxyaabaha lagu soo kordhiyay miisaaniyadda ayaa waxaa ka mid ahaa kharashka Aqalka sare, iyadoona golaha wasiirada ay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen miisaaniyada qaranka, taas oo la horgeyn doono golaha shacabka Soomaaliyeed.
Wasiirka maaliyadda ayaa golaha warbixin ka siiyaay xisaab-xirkii miisaniyaddii 2016-ka, sidoo kalena golahu wuxuu ansixiyay xisaab-xirka iyagoo u gudbiyay golaha shacabka.
Ugu dambeyn, ra’iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte ayaa guddi ka kooban wasaaradaha dekadaha, shaqada iyo shaqaalaha, iyo maaliyada u saaray inay xalliyaan cabashada ka timid qaar kamid ah shaqaale ka shaqeeyn jiray dekadda Muqdisho oo maanta baanaanbax sameeyay.